i-suite entle engu-2 kwindawo entle - I-Airbnb
i-suite entle engu-2 kwindawo entle
sikwiphulo lokuguqula isakhiwo esidala sendlu yesikolo, esinemibono emangalisayo yeendawo zasemaphandleni, i-windmill njl.njl. Sigqibe iSigaba soku-1 esibonelela ngamagumbi ama-3 e-chalet suite - iindwendwe zisebenzise intendelezo yangaphakathi kunye neegadi. Igumbi ngalinye linekhitshi elahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela, indawo yokupaka yasimahla. Indlu yesikolo ingaphandle kwedolophu, ukuhamba imizuzu eli-10 kwiipavumente ezikhanyisiweyo ukuya kwiibhari nakwiivenkile.
I-10 min ukuhamba okanye i-2 min drive ukuya edolophini, sibekwe kwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo. Iindwendwe zinekhitshi eline-microwave, ifriji, umatshini wekofu kunye neketile ukuba zingathanda ukulungiselela isidlo sakusasa - kukho iindawo zokutyela isidlo sakusasa esiphekiweyo edolophini ukuba ziyakhethwa.
I-portaferry yidolophu emangalisayo kwi-peninsula, ikwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo-ukufikelela ngokulula kwiwadi yeCastle (umdlalo wezihlalo zobukhosi) isikhephe sasestrangford kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane zasekhaya.
siqhelekile kwisiza kuyo nayiphi na imibuzo eqhelekileyo kwindawo, amagumbi akho abucala ngokupheleleyo. ngokuqinisekileyo siya kuvuya ukunika iingcebiso kwiindawo ezinomtsalane zasekhaya, iindawo zokutyela njl
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ards